ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on March 16, 2015 at 13:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အလုပ်ခွင်မှာ၊ ကျောင်းမှာ၊ ဈေးထဲမှာ၊ ပါတီမှာ၊ ဟိုမှာဒီမှာစတဲ့ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင်ဟာ တစ်ခါတစ်လေဘဲ ဖြစ်စေ၊ မကြာခဏဘဲဖြစ်စေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ရင်း ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောရတာမျိုး ကြုံဖူးမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူသားတွေ ဖြစ်တဲ့အလျောက် အလုပ်သဘောဖြစ်စေ၊ ခရီးသွားဟန်လွဲဖြစ်စေ အခြားသူတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းကို ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ကြရပါတယ်။ အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီးတော့လည်း ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါ သာသာထိုးထိုးလေးပြောရတာမျိုး (ဥပမာအလုပ်အင်တာဗျူးမှာ) ရှိသလို သိုသိုဝှက်ဝှက်လေး (ဥပမာ အခွန်ဦးစီးအရာရှိနဲ့ စကားပြောတဲ့ အခါမျိုး) ပြောရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ကိုယ့်မြန်မာစကားနဲ့ ပြောရဆိုရတာ ဖြစ်တာမို့ သိပ်မခက်လောက်ပါဘူးနော်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောရရင်ကော ဘယ့််နဲ့ရှိမလဲ။ ဟုက်ကဲ့၊ ကိုယ့်မြန်မာစကားနဲ့ ပြောရတာ လွယ်တဲ့အကြောင်းအရာကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောရတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါ စာသင်ခန်းတွေမှာ အထူးသဖြင့် ပထမဆုံး စတက်တဲ့နေ့တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကုိုကိုယ် မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ လုပ်ရတဲ့ activity တွေမှာ ကြုံဖူးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့လောကမှာ ဒါမျိုးကြုံလာရင် အဲ့ဒီအခြေခံကို ပြန်ပြီး apply လုပ် အသုံးချလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောဖို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ပြောတဲ့အခါ အဓိကပါဝင်ရမယ့် အချက်တွေကို မေးခွန်းတိုလေးတွေလုပ်ပြီး ပြန်ဖြေကြည့်ပါ။ ပထမ မေးလိုက်ဖြေလိုက် လုပ်ပြီးကျင့်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မေးခွန်းတွေကို ဖြုတ်ပြီး အဖြေတွေကိုပဲ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ပြီး logical အစီအစဉ်နဲ့ ပြောကြည့်ပါ။ အထပ်ထပ်ပြောကျင့်ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရာမှာ အဓိက မပါမဖြစ်တာတွေကတော့ နာမည်၊ အသက်၊ နေရပ်၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဝါသနာတွေ စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကို မေးခွန်းလေးတွေ လုပ်ပြီးဖြေကြည့်ပါ။ အောက်မှာ မေးခွန်းလေးတွေ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အသံကျယ်ကျယ်လေးနဲ့ သင့်အဖြေတွေကို ပြောကြည့်ပါလေ။
(ဖြေ) My name is _________
(ဖြေ) I’m _________ years old.
What do you do? (ဒီမေးခွန်းကတော့ သင့်လောလောဆယ် ဘာလုပ်နေသလဲလို့ မေးတာပါ။ သင်ကကျောင်းသားဆိုရင် ကျောင်းသား၊ အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုရင် အလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီလိုဖြေဖို့အတွက်ပါ။)
(ဖြေ) I’m a/an ____________.
(ဖြေ) I live in __________. I like/don’t like living there because _______________.
What are your hobbies? (ဒါကတော့ သင့်အားလပ်ချိန်မှာသင်နှစ်ခြိုက်စွာလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဝါသနာတစ်ခုခုကိုဖြေရပါမည်။ ဥပမာအားကစား၊ စာရေးစာဖတ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာစသည်ဖြင့်)
(ဖြေ) I like to __________ in my spare time.
ပါတီလိုမျိုးတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ တစ်ခါတစ်လေ ပါတီဖိတ်သူ သို့မဟုတ် ဧည့်သည်ထဲက အခြားတစ်ဦးဦးနှင့် သင်ဘယ်မှာ ဘယ်လိုသိခဲ့ (ခင်မင်ခဲ့) သလဲလို့ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို မေးတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။
We met at _________ (နေရာကိုထည့်ပြောပါ။)
I know him/her from __________ (အရင်အတူတူလုပ်ဖူး၊ စာသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာကို ထည့်ပြောပါ။)
သတိပြုစေလိုတာက အခုပြောခဲ့တာက general set of questions ခေါ်တဲ့ လိုရမယ်ရ မေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေ အားလုံးကို မဖြစ်မနေထည့်မေးရမယ်လို့ မဆိုလိုဘူးနော်။ အခြေအနေအလိုက် ကြည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် အင်တာဗျူးတွေမှာတော့ သင့်ရဲ့ ပညာရေးနောက်ခံအကြောင်းတွေ၊ အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြုံတွေ ပြီးတော့ သင်ဘာတွေကို လုပ်ရတာနှစ်သင်ပါသလဲ။ ဘာကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုလျှောက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြရပါတယ်။
ပါတီလိုမျိုး social gathering တွေမှာတော့ သင့်ပညာအရည်အချင်းတွေထက် သင့်အလုပ်အကိုင်၊ သင့်အသက်၊ သင့်မိတ်ဆွေတွေအကြောင်း၊ သင့်ဝါသနာတွေ အကြောင်းစတာတွေကိုပြောရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရတာအဆင်ပြေအောင် ဥပမာလေးတွေ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
I’m 21 years old and have just finished my degree in Business Administrations. I am looking to develop other skills to work in politics. I really enjoyed being the president of the debating society, which helped me to construct arguments from different points of view. I also met many interesting people in that position. I want to learn on the job, which is why I’d like to work for __________(အဖွဲ့အစည်း အမည်) .
I’ve just finished my degree in Business Administration – it wasareally tough three years but it was worth it! I met Sally last year at the debating society party and we got on really well. It must’ve been our love of techno music! How about you?
ကဲ… အခု ဘယ်လို လေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ရင် သင်ပြောချင်တဲ့ သင့်အကြောင်း အချက်လေးတွေကို မေးခွန်းပုံစံနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် မေးရင်း အဖြေလေးတွေကို ပြန်ပြောပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အမေးအဖြေပုံစံလေ့ကျင့်ပါ။ နောက် မေးခွန်းတို ဖြေတာအသားကျလာပြီဆိုရင် မေးခွန်းတွေမပါဘဲ အဖြေတွေချည်းကို အပေါ်က ဥပမာတွေအတိုင်း စီကာပတ်ကုံး ဖွဲ့နွဲ့ပြီးပြောကျင့်ပါ။ မကြာမီ ထူးခြားမှုကို တွေ့လာလိမ့်မယ်နော်။
Kaplan English Website blog မှ Susan ရဲ့ How to talk about yourself in english ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာ (http://www.kaplaninternational.com/blog/how-to-talk-about-yourself-...) မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အလုပျခှငျမှာ၊ ကြောငျးမှာ၊ ဈေးထဲမှာ၊ ပါတီမှာ၊ ဟိုမှာဒီမှာစတဲ့ လူမှု အသိုငျးအဝိုငျး ပတျဝနျးကငျြမှာ သငျဟာ တဈခါတဈလဘေဲ ဖွဈစေ၊ မကွာခဏဘဲဖွဈစေ ကိုယျ့ကိုယျကို မိတျဆကျရငျး ကိုယျ့အကွောငျးကို ပွောရတာမြိုး ကွုံဖူးမှာ သခြောပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လူသားတှေ ဖွဈတဲ့အလြောကျ အလုပျသဘောဖွဈစေ၊ ခရီးသှားဟနျလှဲဖွဈစေ အခွားသူတှနေဲ့ မိတျဖှဲ့ပွီးကိုယျ့ရဲ့ မိတျဆှအေသိုငျးအဝိုငျးကို ကယျြပွနျ့အောငျ လုပျကွရပါတယျ။ အခွအေနအေပျေါ မူတညျပွီးတော့လညျး ကိုယျ့အကွောငျးကို ပွောတဲ့အခါ သာသာထိုးထိုးလေးပွောရတာမြိုး (ဥပမာအလုပျအငျတာဗြူးမှာ) ရှိသလို သိုသိုဝှကျဝှကျလေး (ဥပမာ အခှနျဦးစီးအရာရှိနဲ့ စကားပွောတဲ့ အခါမြိုး) ပွောရတာလညျး ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ ကိုယျ့မွနျမာစကားနဲ့ ပွောရဆိုရတာ ဖွဈတာမို့ သိပျမခကျလောကျပါဘူးနျော။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့အကွောငျးကို အင်ျဂလိပျလို ပွောရရငျကော ဘယျ့နဲ့ရှိမလဲ။ ဟုကျကဲ့၊ ကိုယျ့မွနျမာစကားနဲ့ ပွောရတာ လှယျတဲ့အကွောငျးအရာကို အင်ျဂလိပျလို ပွောရတဲ့အခါ အခကျအခဲတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ တဈကယျတော့ အင်ျဂလိပျစာသငျတဲ့အခါ စာသငျခနျးတှမှော အထူးသဖွငျ့ ပထမဆုံး စတကျတဲ့နတှေ့မှော ကြှနျတျောတို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မိတျဆကျတဲ့အနနေဲ့ လုပျရတဲ့ activity တှမှော ကွုံဖူးပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ လကျတှလေ့ောကမှာ ဒါမြိုးကွုံလာရငျ အဲ့ဒီအခွခေံကို ပွနျပွီး apply လုပျ အသုံးခလြိုကျရငျ အဆငျပွပေါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ကိုယျ့အကွောငျးကိုပွောဖို့ ဘယျလိုလကေ့ငျြ့ရမလဲဆိုတာလေးပွောပွခငျြပါတယျ။ ကိုယျ့အကွောငျး ကိုယျပွောတဲ့အခါ အဓိကပါဝငျရမယျ့ အခကျြတှကေို မေးခှနျးတိုလေးတှလေုပျပွီး ပွနျဖွကွေညျ့ပါ။ ပထမ မေးလိုကျဖွလေိုကျ လုပျပွီးကငျြ့ပါ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ မေးခှနျးတှကေို ဖွုတျပွီး အဖွတှေကေိုပဲ ကြိုးကွောငျးဆကျစပျပွီး logical အစီအစဉျနဲ့ ပွောကွညျ့ပါ။ အထပျထပျပွောကငျြ့ပါ။ အဆငျပွပေါလိမျ့မညျ။ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျပွောရာမှာ အဓိက မပါမဖွဈတာတှကေတော့ နာမညျ၊ အသကျ၊ နရေပျ၊ အလုပျအကိုငျနဲ့ ဝါသနာတှေ စသညျတို့ ဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီအခကျြအလကျတှကေို မေးခှနျးလေးတှေ လုပျပွီးဖွကွေညျ့ပါ။ အောကျမှာ မေးခှနျးလေးတှေ လုပျပေးထားပါတယျ။ အသံကယျြကယျြလေးနဲ့ သငျ့အဖွတှေကေို ပွောကွညျ့ပါလေ။
(ဖွေ) My name is _________
(ဖွေ) I’m _________ years old.
What do you do? (ဒီမေးခှနျးကတော့ သငျ့လောလောဆယျ ဘာလုပျနသေလဲလို့ မေးတာပါ။ သငျကကြောငျးသားဆိုရငျ ကြောငျးသား၊ အလုပျလုပျနတေယျ ဆိုရငျ အလုပျလုပျနတေယျပေါ့။ အဲ့ဒီလိုဖွဖေို့အတှကျပါ။)
(ဖွေ) I’m a/an ____________.
(ဖွေ) I live in __________. I like/don’t like living there because _______________.
What are your hobbies? (ဒါကတော့ သငျ့အားလပျခြိနျမှာသငျနှဈခွိုကျစှာလုပျလရှေိ့တဲ့ ဝါသနာတဈခုခုကိုဖွရေပါမညျ။ ဥပမာအားကစား၊ စာရေးစာဖတျ၊ ရုပျရှငျကွညျ့တာ၊ သီခငျြးနားထောငျတာစသညျဖွငျ့)
(ဖွေ) I like to __________ in my spare time.
ပါတီလိုမြိုးတှဆေုံ့ပှဲတှမှော တဈခါတဈလေ ပါတီဖိတျသူ သို့မဟုတျ ဧညျ့သညျထဲက အခွားတဈဦးဦးနှငျ့ သငျဘယျမှာ ဘယျလိုသိခဲ့ (ခငျမငျခဲ့) သလဲလို့ တဈယောကျယောကျက သငျ့ကို မေးတာမြိုးရှိတတျပါတယျ။
We met at _________ (နရောကိုထညျ့ပွောပါ။)
I know him/her from __________ (အရငျအတူတူလုပျဖူး၊ စာသငျခဲ့ဖူးတဲ့ အကွောငျးအရာကို ထညျ့ပွောပါ။)
သတိပွုစလေိုတာက အခုပွောခဲ့တာက general set of questions ချေါတဲ့ လိုရမယျရ မေးခှနျးတှဖွေဈတယျ။ ဒီမေးခှနျးတှေ အားလုံးကို မဖွဈမနထေညျ့မေးရမယျလို့ မဆိုလိုဘူးနျော။ အခွအေနအေလိုကျ ကွညျ့သုံးနိုငျပါတယျ။
အလုပျအကိုငျ အငျတာဗြူးတှမှောတော့ သငျ့ရဲ့ ပညာရေးနောကျခံအကွောငျးတှေ၊ အလုပျအကိုငျအတှအေ့ကွုံတှေ ပွီးတော့ သငျဘာတှကေို လုပျရတာနှဈသငျပါသလဲ။ ဘာကွောငျ့ ဒီအလုပျကိုလြှောကျပါသလဲဆိုတာတှကေိုပွောပွရပါတယျ။
ပါတီလိုမြိုး social gathering တှမှောတော့ သငျ့ပညာအရညျအခငျြးတှထေကျ သငျ့အလုပျအကိုငျ၊ သငျ့အသကျ၊ သငျ့မိတျဆှတှေအေကွောငျး၊ သငျ့ဝါသနာတှေ အကွောငျးစတာတှကေိုပွောရတာ ဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာရတာအဆငျပွအေောငျ ဥပမာလေးတှေ ဖျေါပွပေးလိုကျပါတယျ။
I’m 21 years old and have just finished my degree in Business Administrations. I am looking to develop other skills to work in politics. I really enjoyed being the president of the debating society, which helped me to construct arguments from different points of view. I also met many interesting people in that position. I want to learn on the job, which is why I’d like to work for __________(အဖှဲ့အစညျး အမညျ) .
ကဲ… အခု ဘယျလို လကေ့ငျြ့ရမလဲဆိုတာ သဘောပေါကျရငျ သငျပွောခငျြတဲ့ သငျ့အကွောငျး အခကျြလေးတှကေို မေးခှနျးပုံစံနဲ့ သငျ့ကိုယျသငျ မေးရငျး အဖွလေေးတှကေို ပွနျပွောပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ သူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့ အမေးအဖွပေုံစံလကေ့ငျြ့ပါ။ နောကျ မေးခှနျးတို ဖွတောအသားကလြာပွီဆိုရငျ မေးခှနျးတှမေပါဘဲ အဖွတှေခေညျြးကို အပျေါက ဥပမာတှအေတိုငျး စီကာပတျကုံး ဖှဲ့နှဲ့ပွီးပွောကငျြ့ပါ။ မကွာမီ ထူးခွားမှုကို တှလေ့ာလိမျ့မယျနျော။
Kaplan English Website blog မှ Susan ရဲ့ How to talk about yourself in english ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီနရော (http://www.kaplaninternational.com/blog/how-to-talk-about-yourself-...) မှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by Khin Myat Myat Thin on March 16, 2015 at 17:04
Permalink Reply by U Tin Mg Lwin on March 16, 2015 at 18:02
Permalink Reply by ye tun on March 16, 2015 at 22:43
Permalink Reply by kaungmyatthu000@gmail.com on March 17, 2015 at 10:44
Permalink Reply by Myat Noe Thu on March 17, 2015 at 15:13
Permalink Reply by Khine Myo Tun on March 18, 2015 at 19:22
Permalink Reply by thihahlaing on August 15, 2018 at 15:43